चकलेट भर्न संग बदाम कुकीज | बेजिया
मारिया vazquez | 07/09/2021 10:00 | Postres
कसलाई लाग्दैन कि यी प्रयास गर्न चकलेट भर्न संग बदाम कुकीज? तिनीहरूको छवि द्वारा टाढा नगर्नुहोस्, उनीहरुको सादगी नाश्ता वा नाश्ता मा एक गिलास दूध वा कफी मा डुबाउने खुशी संग असंगत छैन। यद्यपि तपाइँ संगत बिना पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
यी चकलेट भरिएको बदाम कुकीज तिनीहरू धेरै सरल छन्। कदम द्वारा कदम द्वारा डराउनु पर्दैन! यो बिभिन्न अवयवहरु को मिश्रण को रूप मा सजिलो छ र त्यसपछि दुई मा आटा अलग कुकीज को बादाम आधार र केन्द्र मा चकलेट मिश्रण प्राप्त गर्न को लागी।
यो तपाइँलाई बनाउन र तिनीहरूलाई तयार गर्न ३० मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन घरमा साना बच्चाहरु तपाइँलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै जसो उनीहरुका हातहरु फोहोर हुन मन पराउँछन् र यिनीहरुमा यो कुकीहरु लाई आकार दिन को लागी आवश्यक छ। के तपाइँ तिनीहरूलाई गर्न हिम्मत गर्नुहुन्छ? यदि तपाइँ बदाम कुकीज मनपर्छ, यी पनि प्रयास गर्नुहोस् खुबानी जाम संग.
G 140 g बदामको पीठो
१०० g सम्पूर्ण दलिया
G० g बदाम क्रीम
60 ग्राम। कच्चा मह
२ g g शुद्ध कोको
रासायनिक खमीरको १२ ग्राम
ओवन १ 180० डिग्री सेल्सियस मा प्रीहीट गर्नुहोस् माथि र तल तातो संग।
आटा छान र तिनीहरूलाई एक कटोरा मा आरक्षित गर्नुहोस्।
अर्को कचौरामा भिजेको सामग्री हट्नुहोस्: अण्डा, मह, जैतून का तेल र बदाम क्रीम।
त्यसपछि, रासायनिक खमीर समावेश गर्दछ यी गीला अवयवहरुमा। त्यसपछि sifted आटा जोड्नुहोस् (पछि को लागी एक चम्मच आरक्षित) हलचल जब सम्म तपाइँ एक आटा पाउनुहुन्छ।
आटा को 1/3 अर्को कटोरामा स्थानान्तरण गर्नुहोस् र यसमा कोको एकीकृत गर्नुहोस्।
अन्य कटोरा मा, आटा को शेष 2/3 संग, आटा र मिश्रण को आरक्षित चम्मच जोड्नुहोस्।
पछि प्रत्येक आटा 14 बल मा विभाजित गर्नुहोस्।
कुकीज जम्मा गर्नुहोस्। यो गर्न को लागी, बदाम आटा को एक बल लिनुहोस् र यसलाई सपाट गर्नुहोस्। यो संग एक कोको आटा बल लपेट्न को लागी यो प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यसपछि एक मा बल राख्नुहोस् पंक्तिबद्ध बेकिंग ट्रे र यसलाई थोरै सपाट गर्नुहोस्।
जब तपाइँ सबै बलहरु संग पूरा गर्नुभयो २० मिनेट को लागी बेक गर्नुहोस् वा तिनीहरू खैरो गर्न सुरु सम्म।
एक पटक सकिएपछि, उनीहरुलाई ओवन बाट बाहिर निकाल्नुहोस् र तिनीहरूलाई एक तार रैक मा चिसो दिनुहोस्।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » व्यंजनहरु » Postres » चकलेट भर्न संग बदाम कुकीज